नेता बन्ने कि नेतृत्व गर्ने ? – Nepal Press
नेता बन्ने कि नेतृत्व गर्ने ?
सिन्धु एमालेका १० चुनौती र नयाँ नेतृत्व
२०७८ पुष २२ गते १५:५८
मार्टिन लुथर किङले भनेका छन्– म सँग सपना छ । नेतामा सपना देख्ने क्षमता चाहिन्छ । उनले भनेझै देश र जनताको हित हुने सपना नदेख्ने नेता, जनताको नेता हुन सक्दैनन् । तर नेता मात्रै चाहिँ हुन सक्छन् । कस्तो खाले भने– देशबाट मस्त लिने, आफू, परिवार अनि आफन्तलाई पोस्ने खालको।
नेता हुनु र नेतृत्व गर्नु अलग कुरा हो। नेता मात्रैले नेतृत्व नगर्न सक्छन् तर जसले नेतृत्व गर्छ, उ खास नेता हो। असल नेता हुन अझ नेतृत्व गर्न त्यति सहज छैन । तर अहिले पछिल्लो समय जो पनि नेता भएका छन्।
असली नेता त्यो हो, जसले भिडलाई पछि लगाउन सक्छ। भिडको पछि लाग्ने त नेता नै होइन । तर बिडम्बना नेपालमा भिडलाई पछि लगाउनेभन्दा भिडको पछि लाग्ने ‘कथित नेता’हरूको संख्या अधिक छ।
आजको मुल प्रश्न नै यही हो कि, नेता हुने कि नेतृत्व गर्ने त ? कुनै पनि सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक आदि पक्षको वृत्ति–विकासको लागि नेता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । काम गर्ने आँट, दृढ विश्वास अनि समाज रुपान्तरणको सपना देखियो भने नेता हुन जरुरत नै पर्दैन । नेतृत्व स्वतः आइपुग्छ।
कहिलेकाहीँ मान्छेको कर्मले नै पद खोज्दै आइपुग्छ। तर जसले बढी पद खोज्छ, कामभन्दा पदमा अनि लाभमा ध्यान दिन्छ, त्यस्ता प्रवृत्ति भएका व्यक्ति नेता मात्रै चाहिँ हुनसक्छ । तर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । अर्थात् नेतृत्व गर्न सक्दैनन् ।
पार्टी–आन्दोलनलाई उचाइमा लाने कि आफू नेता बन्ने ?
अहिलेको मुख्य समस्या नै यहीं हो कि, पार्टी–आन्दोलनलाई उचाइमा लाने कि आफू नेता बन्ने ? भन्ने । पार्टी र आन्दोलन कमजोर किन नहोस्, कुनै प्रवाह छैन तर जसरी पनि आफू नेता बन्न पर्यो। नेपालमा पछिल्लो समयमा च्याउसरी पार्टी निर्माण हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो।
नेता भएपछि जतासुकै आफ्नो मान बढ्ने सम्झने, प्रहरी–प्रशासन, कर्मचारीमा सरुवा–बढुवा आदिमा ‘नेता’ भन्ने चिजको ग्लामर देखाउन पनि आन्दोलनको वास्ता नगरी पदको लागि मरिहत्ते गरेका छन् । विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर शानको साथ एउटा आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुको अपवित्र गठबन्धन अनि सिद्धान्त नै नमिल्ने पार्टीमा प्रवेश। यस्ता उदाहरण हेर्ने हो भने बग्रेल्ती भेटिन्छन्।
भोलि नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन देशभर हुँदैछ । जसअनुसार सिन्धुपाल्चोकको पनि अधिवेशन हुँदैछ । यो अधिवेशका केही महत्वपूर्ण कार्यभार छन् । ती यस प्रकार छन्–
१. एमालेको संगठन लय पुरानै स्थितिमा पुर्याउन चुनौती छ।
२. नवयुवाहरू पार्टीमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ।
३. संगठनलाई स्पातिलो बनाउनुपर्ने छ ।
४. कार्यकर्ताहरुलाई फलामे अनुशासनमा राख्नुपर्ने चुनौती छ।
५. कम्युनिस्ट आन्दोलन, मार्क्सवाद, जबज, एमालेले गरेको काम, प्रशिक्षण दिएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ।
६. पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने छ।
७. नेता, कार्यकर्ताहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ।
८. नेतृत्वको जाम खुलाउने चुनौती छ।
९. पार्टीमा युवापुस्ता र पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउने पुस्ता मिलाएर नेतृत्व स्थापित गर्ने मुख्य चुनौती छ।
१०. पार्टीविरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति लागेको हुँदा पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर जनतामाझ जान झनै चुनौती छ।
यस्तै चुनौती सामना गर्ने नेतृत्वको खाँचो छ।
अन्त्यमा, पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको सपना एमालेको नारा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’लाई साकार पार्नुछ । नेपाललाई विकास गर्नुछ। नेपालीको जीवनस्तर सुधार्नु छ। आधारभूत चिजहरु सर्वसुलभ गर्नुपर्छ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य आममानिसको पहुँचमा पुग्ने बनाउनु छ। र मुख्य अभिभारा, समातामूलक समाज निर्माण गर्नुछ।
प्रकाशित: २०७८ पुष २२ गते १५:५८
One thought on “नेता बन्ने कि नेतृत्व गर्ने ?”
Uddhav parajuli says:
हजुरआमाको ऊर्जावान् हाँसो र लोभलाग्दो अनुभूति
पिस्कर विद्रोहबाट हामीले के सिक्यौं ?
लिपुलेक र कालापानीमा लड्दा ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा परेका सांसदको बकपत्र
अब एक दशकका लागि निर्बिकल्प ओली !
महामहिमलाई महाप्रसाद, महारानीलाई सलाम
‘सुन्दरी सुनिता’को अनौठो ठगीधन्दा